नायिका साम्राज्ञी कहाँ छिन त ?:: Mero Desh
नायिका साम्राज्ञी कहाँ छिन त ?
Published on: १४ भाद्र २०७८, सोमबार ०६:५६
नायिका साम्रज्ञी को’रो’ना कहरको समयमा कहाँ छिन के गर्दै छिन भनेर दर्शकको मनमा खड्किरहेको एउटा प्रश्न हो। अन्य कलाकारहरु को’रो’नाको समयमा पनि सामाजिक सन्जालमा बेला बेला देखा परिरहन्छन् भने साम्राज्ञि चाहिँ मिडियामा देखा परेकी छैनन।
पछिल्लो समयकी हिट अभिनेत्री हुन् साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह । ‘ड्रिम्स’ फिल्मबाट अभिनयमा डेब्यु गरेकी साम्राज्ञी को दर्शकमा राम्रो क्रेज छ । उनी अभिनित केही फिल्म हिट छन्, त केही फ्लप । तर पनि उनका लागि फिल्मका भने ताँती छन् ।केही अगाडि अभिनेता भुवन केसीसँगको
वि’वा’दका कारण चर्चाको बिषय बनेकी उनी प्रेमीसँगको अन्तरंग तस्बिरले मिडियामा बारम्बार छाउने गर्छिन् । को’रो’ना कहर सुरु भएदेखि भने उनी चुपचाप छिन् । उनी कहाँ छिन् , के गर्दैछिन् बाहिर त्यति आएको छैन । सामाजिक सञ्जालबाट भने उनले बेला बेलामा कपडाको प्रचार गरेको देखिन्छ ।
कतिपयले उनीअनलाइन मार्फत कपडा व्यवसाय गरिरहे को अनुमान गरेका छन् । पछिल्लो समय उनको ‘मारुनी’ र ‘रातो टीका निधारमा’ फिल्म रिलिज भएको थियो । दुबै फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो ब्यवसाय गर्न सकेन । निषेधाज्ञाअघि फिल्म ‘ तिम्रो मेरो साथ’ को छायाँकन सकाएकी उनी अहिले
भने कपिल रिजालको निर्देशन रहने एक फिल्ममा काम गर्ने तरखरमा रहेकी छन् । फिल्ममा जीतु नेपाल उनको जोडी रहने बताइएको छ । कपिलको फिल्मको अलवा उनी हेमराज विसी, मिलन चाम्स र प्रवेश पौडेलको फिल्म मा पनि देखिने चर्चा छ । यो बिषयमा उनको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी रहेको छ ।